आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप, कुन जिल्लामा कुन उमेर समूह ? - Pardeshi Khabar
काठमाण्डौ– सरकारले आजदेखि देशैभर भेरोसेल खोप वितरण गर्दैछ । चीनबाट खरिद गरी ल्याएको४० लाख डोज कोभिड–१९ विरुद्धको भेरोसेल खोप देशैभर वितरण गर्न लागिएको हो । यसका लागिठाउँ अनुसार लक्षित समूहको वर्गीकरण गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाण्डौ‍, ललितपुर, मकवानपुर, रामेछाप, सर्लाही र अछाममा ४०वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोप दिइने छ । यी जिल्लामा खोप लगाउन छुटेका विद्यार्थीलाई पनिखोप लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मनाङ, मुस्ताङ र रुकुम पूर्वबाहेक ५५ जिल्लामा भने ४५ वर्षमाथिका सबै नागरिकलाई खोपलगाइनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, बाजुरा र दार्चुला जिल्लामा १८ वर्षमाथिका खोप लगाउन बाँकी रहेका सबैनागरिकलाई खोप दिइनेछ ।
काभ्रे र चितवनमा भने ३५ वर्षमाथिका सबै नागरिक र १८ वर्षमाथिको खोप लगाउन छुटेकाविद्यार्थीलाई लगाइने छ । सबै जिल्लामा खोप लगाउन छुटेका १८ वर्षमाथिका विद्यार्थीलाईप्राथमिकतामा राखिएको छ ।
खोप लगाउन जाँदा आफ्नो उमेर र पेसा खुल्ने परिचय पत्र अनिवार्य लिएर जान आग्रह गरिएको छ ।परिचय पत्र नभएको खण्डमा पालिकाबाट उमेर खुल्ने सिफारिस लिएर जान भनिएको छ । आजदेखिसुरु खोप अभियान आउँदो १४ गतेसम्म चल्ने छ ।
अहिले पहिलो डोज लगाएकालाई कार्तिक ४ गतेदेखि १४ गतेसम्म दोस्रो डोज खोप लगाइने पनिस्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । न्युज साभार उज्यालो अनलाइनबाट
« ७० प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक भन्छन्– मेनपावरबाट विदेश जान्नँ! (Previous News)
(Next News) अध्यक्षसहित सबै पदाधिकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने प्रस्ताव एमालेमा, ७० वर्षे उमेरहद पनि राखिने »